Meksika: Angona Kilalao Mety Hanova Ny Hoavin’i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2012 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, عربي, македонски, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Manana kilalao voaangona, saiky vita avy tao Meksika, mihoatra ny iray tapitrisa ny lehilahy iray 65 taona. Nanapa-kevitra ny hanokatra ny tranony ho mozean'ny kilalao ny mpanao maritrano Meksikana Robert Shimizu sy ny zananilahy. Ao amin'ny lahatsary fampafantarana, ahitana dika an-tsoratra teny anglisy ny zava-boalaza, mitondra ny lohateny hoe Tantara Meksikana Iray Momba Ny Kilalao no itantarana ny nahavitany sy ny iheveran'izy ireo fa mety hahita ny lalany indray i Meksika amin'ny alalan'ireo kilalao ireo.
Efa nanomana hetsika maro ny Mexico Antique Toy Museum [es] ahafahana mamory ny mpanangona hanana tanjona iraisana sy hikendry ny hamelona indray ny fitiavan'ny olona ny vokatra vita ao an-toerana tahaka ny kilalao ohatra. Hampiatrano ny Toy Design and Construction workshop [es] (Atrikasam-pananganana sy haibikan'ny kilalao) ry zareo amin'ny volana mey; ary haranty maharitra ao amin'ny Mozea ny kilalao tsara indrindra mivoaka avy ao.
Mamehy ny asany [iraka ataony] ny famahavahana ataony ao amin'ireo lahatsary maro hita ao amin'ny Fantsona YouTube-n'ny Mozea:
Ny lahatsary manaraka fampirantiana Lucha Libre izay notontosaina ao amin'ny Mozea ho fankalazana ny tsingerintaona fahatelo nijoroany ity no ohatra iray amin'ny fampiroboroboany ny haizatran'ny kolontsaim-bahoaka.